Ra’iisul wasaare Rooble oo kulan la qaatay Danjiraha Sacuudigga u fadhiya Soomaaliya. | dayniiile.com
Home WARKII Ra’iisul wasaare Rooble oo kulan la qaatay Danjiraha Sacuudigga u fadhiya Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Rooble oo kulan la qaatay Danjiraha Sacuudigga u fadhiya Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay safiirka Dowladda Boqortooyada Sacuudiga Carabiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Axmed Bin Maxamed Al-Muwalad oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa.
Previous articleXoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo booqasho ku jooga dalka Finland oo ka hadlay walaac ammaanka ee Turkigu Finland iyo Sweden
Next articleRuushka oo hubka halista ah ee la mamnuucay ku garaacay Ukraine
Halkaan ka Daawo Dowladnimada uu rabo Xasan Cali Kheyre